I-Illinois Home Grow Rules Cannabis, Ungayitshala kanjani insangu ngokusemthethweni e-Illinois
Ukukhula kwensangu ekhaya lezakhamizi ezithile zase-Illinois ngamakhadi abo ensangu aqala ngoJanuwari 1, 2020 - nayi indlela i-Home Grow e-Illinois esebenza ngayo.
I-Illinois Home Yakha Izakhamizi Zezokwelapha Zensangu
Ukukhula kwensangu ekhaya lase-Illinois kuyatholakala kwiziguli ze-cannabis yezokwelapha lapho zihlala khona ngokuyinhloko - ngomkhawulo wezihlanu (5) izitshalo ze-cannabis ezingaphezu kwamasentimitha amahlanu (5) ubude - indlu ngayinye hhayi umuntu ngamunye.
Lalela noma ubuke ukubuyekezwa kwe-Article 10 ye Ukusetshenziswa komuntu siqu kweCannabis (ukukhula ekhaya). Chofoza isixhumanisi somthetho wamakhasi aphelele angama-610 apasiswe yi-Illinois Legislature
Umbhalo womthethosivivinywa ophathelene nokukhuliswa kwekhaya lezakhamuzi zensangu yezokwelapha e-Illinois yokuhlala yabo engezansi ungezansi, kanye nombhalo wevidiyo nendatshana emthethweni uqobo.
ISIQONDISO ESIQALILE: UKWAKHA IMBEWU NGOKUSEMTHETHWENI KWE-ONLINE
Home Grown Cannabis Kungaba Lula
Eqinisweni, ngokwasemthethweni okwenziwe kwakamuva nje kwensangu ekhula ekhaya ngezinjongo zokwelapha esifundazweni sase-Illinois, abatshali abaningi kunanini ngaphambili baphendukela ku-Intanethi ukuthola izeluleko.
Ukwazi ukuthi ungatshala kanjani insangu e-Illinois kuhilela ukwazi izidingo ezihlukile zalesi sifundazwe - nokuthola izindlela zokusebenza nalokho onakho.
Gcwalisa isicelo bese uthola ikhadi le-Cannabis Medical
Ngeshwa, akuwona wonke umuntu ongakhulisa insangu yakhe e-Illinois. Udinga ukuthi uhlele ukusebenzisa i-cannabis ngenhloso yokwelapha, futhi udinga ukufaka isicelo selayisense ye-cannabis yezokwelapha - noma ikhadi. Ukuze uthole ilayisense, udinga ukufaka isicelo - okuvame ukuthatha izinyanga eziyishumi kuya onyakeni ozocutshungulwa ngo-2015. Kodwa-ke, ngo-2020, ungathola ikhadi lakho le-cannabis yezokwelapha e-Illinois ngosuku noma ngaphansi kuphela.
Akubona bonke abatshali bezimali abazothola amalayisense abo, noma. Kodwa-ke, isinyathelo sokuqala (futhi esidingekayo!) Okufanele usithathe.
Izinzuzo Zokukhula Kwendlini
Isimo sezulu sase-Illinois sinjalo ukuthi ukukhula insangu engaphandle akunconywa kakhulu. Ngakho-ke, uzoba ophumelele kakhulu ukukhula insangu endlini.
Ziningi izinzuzo zokwenza njalo. Ngeke nje ukwazi ukulawula izinga lokushisa kwakho, umoya, ukukhanya, nomswakama, kodwa futhi uzonikeza izitshalo zakho indawo ekhula ngokuzinza ngokwengeziwe. Lokhu kungakhuphula umkhiqizo wakho esikhathini eside.
Naka Izidingo Zakho Zemvelo
Uma uke waqonda esikhathini esedlule, cishe uyazi ukuthi ezinye izitshalo zingaba yisiqholo kanjani! I-Cannabis ayihlukile. Kuzodingeka ulungise ukukhanyisela ngaso sonke isigaba sokukhula futhi unikeze okungenani umswakama ongu-40 kuye kwangama-60%. Uzodinga amazinga okushisa angama-70 kuye kwangama-85 degrees (lapho izibani zivaliwe) nama-58 kuya kwangama-70 degrees (lapho amalambu ecishiwe).
Uzodinga nokugcina ikhwalithi yomoya efanelekile nge-vent, isikhumulo sezindiza, nesihlungi, futhi uzodinga ukugwema ukubhala ngaphezulu.
Uma unenhlanhla ngokwanele yokuthola ilayisense yokukhulisa insangu ye-cannabis e-Illinois, cishe uzobe usushayela phansi kancane ukuze uqalise. Ungazivumeli ukuba uthathwe.
Qiniseka ukuthi unemishini efanelekile nokuthi wazi kanjani ngaphambi kokuthi uqale. Kunezinhlobo zonke zezinto zokwakha ozodinga ukutshala kuzo, futhi nekhwalithi engcono ongayikhokha, okuzoba ngcono kakhulu kuwe kamuva.
Ezingeni eliphansi kakhulu, uzodinga:
Igumbi lokukhula noma ibhokisi lokukhula
Thola Imbewu Efanele
Ngaphezu kwemishini eshiwo ngenhla, uzodinga nokutshala imbewu efanele. Uma ukhula insangu ngezinjongo zokwelapha, uzofuna ukukhetha uhlobo olunamanani amakhulu we-cannabinoids. Ngaphandle kwalokho, uhlobo oluhle kakhulu lwe-cannabis luyehluka, kepha izinketho zifaka i-sativa, i-indica, kanye ne-nzalo.
Lawula umugqa wesikhathi woMhlwanyeli
Uma usunayo yonke imishini yakho, kuzodingeka uzijwayeze ngazo zonke izinyathelo ezihilelekile ekutshaleni insangu. Vele, uzoqala ngokutshala imbewu yakho bese uyilinda ukuthi ihlume, kepha lapho-ke kuzodingeka ubonise ukubekezela njengoba izitshalo zakho zidabula izithombo, izitshalo, izimbali, bese ekugcineni - izigaba zokuvuna nezokwelapha.
Yiba nesineke, kepha ukusebenza kwakho kanzima kuzokukhokhela. Ukufunda ukuthi ungayikhulisa kanjani insangu e-Illinois akugcini ngokuzuzisa futhi kuyacebisa kodwa futhi kungakuzuzisa kakhulu.
I-Illinois Home Grow Statue yi-Article 10 ye-CRTA Yokusetshenziswa Komuntu
Funda umthetho we-IL ngezansi kusuka ku: Isigaba 10 seCRTA
I-Illinois homegrown insangu video
(lokhu kungumbhalo wevidiyo nepodcast ngenhla.)
O, sanibonani nonke. Ngicabange ukuthi kungaba ngumqondo omuhle mhlawumbe ukusondela kumbhobho. Kepha woza lapha bese udlulisa okwenzeke izolo kusihlwa eSpanish, e-Illinois. Uyabona, i-Illinois empeleni yenze insangu ngokusemthethweni. Manje, uma ngithi i-Illinois yenze insangu ngokusemthethweni, ngicabanga ukuthi kufanele ngikufanelekele lokho. Isenate yase-Illinois ivote futhi yadlulisa ngokusemthethweni insangu. Futhi i-Illinois 'esemthethweni yensangu kwakungu-HB1438. Futhi abanye abantu babebuza,
"Kungani iHB1438 hhayi iSB007?"
Ngakho-ke ngizokwabelana ngesikrini sami ngempela, ngokushesha okukhulu. Futhi-ke uzokwazi ukubona lezi, isikweletu.
Ngakho-ke uma u-google ummeli we-cannabis, ungangithola kanjalo. Igama lami nginguTom Howard. Ngiyi… Le yiwebhusayithi yami Ummeli Wezimboni zeCannabis. Okwamanje kuphela ikheli laseChicago elaphaya phezulu. Nginenkinga nge… Google ibhizinisi lami. Kepha uyazi ukuthi lokho kwenzeka kanjani.
Ngakho-ke noma kunjalo, lena yikhophi yesikweletu. Futhi uma ngilawula ukuthola futhi, uzobona ukuthi bengifuna umhlali. Isizathu sokuba ngifune umhlali… Futhi ngikholwa ukuthi bekungukuthi uma wenza ukulawula i-F kulesi sizinda lapha… Futhi lesi sizinda, ungakhathazeki, ngizokuyeka encazelweni yale vidiyo uma nje sengiqedile. Uzokwazi ukubona ukuthi kudlule ini iSigele sase-Illinois izolo. Futhi abanye abantu bathi, "Alikho ikhaya elikhulayo?" Empeleni yilokho ebengikubonisa kona.
Futhi-ke uma uya futhi usesha i-SB… Cha akuyona i-SB. Le yi-HB1438 edluliswe yiSenate yase-Illinois izolo, umhlali wesishiyagalolunye ophuma egameni lama-9 uzokuletha ekukhuleni kwabantu abadala base-Illinois. Futhi kusekhona ukukhula ekhaya. Kodwa-ke, sethule imikhawulo ethile. Tokokuqala uphuza ikhofi yasekuseni. O nkosi. I-Illinois futhi ikakhulukazi iPeoria, e-Illinois ilungele ikhofi entsha eyosiwe. Angiqiniseki ukuthi ngingaya kwenye indawo.
Ngakho-ke ukukhula ekhaya kuzobe kukhona. Kodwa-ke baqinisekisile ukuthi kuzoba ngumuntu othile, kukhawulelwe kumhlali wase-Illinois, oneminyaka engu-21 ubudala noma ngaphezulu, oyisiguli esifanelekayo ngaphansi kohlelo lokushayela i-Compassionate of Medical Cannabis. Labo bangalima ngaphandle komkhawulo wezitshalo ezinhlanu ezingaphezulu kwamasentimitha ayisihlanu ngomuzi ngamunye. Ngaphandle kwesikhungo sokulima noma ilayisense lokutshala ubuciko. Futhi-ke kulesi sigaba, umhlali, kusho umuntu ophethwe umbuso esifundazweni sase-Illinois isikhathi esiyizinsuku ezingama-30 ngaphambi kokutshalwa.
I-Illinois ikhaya likhula insangu
Ngakho-ke njengoba abantu bekutshela ukuthi alikho ikhaya elikhulayo ngokusemthethweni kwe-Illinois ukusetshenziswa kwabantu abadala. Isikweletu esinqunyelwe, akukho ukukhula kwekhaya kwabantu okungezona iziguli zensangu yezokwelapha. Uma uyisiguli sensangu yezokwelapha e-Illinois kusadingeka ukhule ekhaya. Kusho ukuthini uma ngithi… Kulungile kuyadukisa kancane. Ngithe i-Illinois yenze insangu ngokusemthethweni. Lesi yisikhathi sokuqala ukuthi i-Illinois ivote ukuvuna insangu ngokusemthethweni ezingeni likahulumeni. Yilokho nje okushiwo, ngaphandle kweNebraska, kungama-bicameral. Ngakho-ke iSenate isidlulile. Kepha lokho kuyaxaka ngoba umthethosivivinywa weSenate ngu-SB007. Kepha akusiyona leyo mali abayidlulisile. Esikhundleni salokho badlula i-HB1438. Futhi i-HB1438 impela yi-House bill. Futhi-ke ukuthi umthethosivivinywa weNdlu yilokho okwethulwe kowethu… Bese kwashintshwa nguCassidy eNdlu ukuze afanelekele ukuthi ikhaya likhule libe yiziguli zensangu kuphela. Enye into engizoyifaka bese ngigxumela emuva kusabelo sesikrini lapha ngokushesha okukhulu. Angizukuhlanganyela nawe kuphela… Ngakho-ke iya ku, futhi ilapho nje, ikhasi 40 le-Illinois Med…
Ithemu 2020 ivela amahlandla angama-32 e-Illinois Adult Use Cannabis Law
Hhayi-ke akuyona insangu yezokwelapha, ngumuntu omdala sebenzisa insangu manje. Yilapho ungathola khona ukuthi ikhaya lakho likhula uma uyisiguli sezokwelapha. Kepha ake sikhulume ngonyaka we-2020. Lokho kufanele kwe… 2020. Kungani ikhibhodi yami ingaphenduli? Kulungile, kuyaphendula lokho. Lawula ukutholwa… Kulungile manje kuyasebenza. Izinkinga ezincane zobuchwepheshe zihlala zenzeka. Ngakho-ke ake sibheke igama elithi 2020. Futhi igama elithi 2020 lizovela izikhathi ezingama-32 kulo mthetho. Kungani sifuna igama elithi 2020? Ngoba uma lokhu kudlula sizoya esikhathini esithandekayo emlandweni wase-Illinois lapho izicelo eziningi zizinhlobo ezithile zamalayisense okusebenzisa insangu yabantu abadala zizofika ku-inthanethi ngonyaka ka-2020. Okungenani kulapho lezo zicelo zizofaneleka khona . Usuku lokuqala lwezinhlamvu ezibomvu luzoba ngoMeyi wango-2020. Kodwa empeleni ake siqale ngosuku lokuqala lwangempela, uJanuwari 1 ka-2020. Januwari 1 ka-2020 kuzoba usuku ongahamba ngalo uthenge insangu yabantu abadala. Kungenzeka futhi kube usuku okuyilo usuku lokuqala kwalokhu.
Manje izolo besisohlelweni nami sikhuluma ngezindaba zokugunyazwa kwe-cannabis. Bhalisa manje ukuze uhlanganyele nathi. Njalo ngoLwesithathu ngehora lesibili ntambama sidlula ezindabeni zokugunyazwa kwe-cannabis kuleli sonto. Futhi-ke bavame ukuba nezindaba ezinkulu kakhulu zokugunyazwa kwe-cannabis ngokushesha nje lapho siphuma kulokho kusakaza. Vakashela iSenate yase-Illinois edlulisa insangu. Uxolo. Anginaye umuntu engingamphonsa kuye ongagcwalisa isikhathi. Ngakho-ke ngoJanuwari 2 ka-1 uzobe usubhalise insangu ngokusemthethweni futhi kufanele kube semthethweni ukuyithenga. Kepha ngeke kube semthethweni ukuthenga kubo bonke abantu. Esikhundleni salokho kuzoba semthethweni ukuthenga kusuka ekuvunyelweni kwasekuqaleni izinhlangano zabantu abadala zokuhlinzeka ngemishanguzo. Ngakho ngilapha. Ngakho-ke lezi ngokuyisisekelo kuzoba yizinkampani zensangu yezokwelapha ezizobe zizalwa kuzo. Futhi lezo yizo ezingase ziqale ukuthengisa insangu kubathengi ngalolo suku lokuqala luka-2020.
Manje-ke, leso sikhathi i-2020 ivela izikhathi ezingama-32. Futhi angibhekile… Nakho lapho. Nakhu siya, nakhu siya. Yilokho ebengikufuna. Umnqamulajuqu kaMeyi 1, 2020, wokunikezwa kwelayisense yenhlangano yokusebenzisa abantu abadala enemibandela ngaphambi kukaJanuwari 1, 2021. Iminyango, umnyango kusho ukuthi umnyango wezolimo, uzokhipha amalayisense wenhlangano afinyelela kuma-75 abantu abadala ngaphambi kukaMeyi 1, 2020. Futhi-ke bazokwenza isicelo sokusetshenziswa kwabantu abadala, yebo, isicelo ngeke kuze kube ngo-Okthoba 1, 2019. Mhlawumbe nina bafana, kuhle niyakwazi lokhu ngami. Ngimele izinkampani eziningi ze-hemp. Futhi isicelo se-hemp asizange senziwe esidlangalaleni kuze kube ngu-Ephreli 30 walonyaka. Kunjalo, ngenyanga edlule kuze kube namuhla. Futhi ngaleso sikhathi ifoni yami yaqhuma futhi bengisiza abantu abaningi.
Kepha manje sizoba nento efanayo. Lapho abantu abaningi bezofuna eyodwa yalawo malayisense angama-75. Futhi bazofuna ukufaka isicelo salinye lalawo malayisense ngaphambi kukaMeyi 1 ka-2020. Kepha lokhu ngeke kube lula njengelayisense ye-hemp esetshenziswa kalula futhi enhle ukufika kuyo. UJeff Cox kanye nomnyango wezitshalo zezokwelapha eMnyangweni Wezolimo e-Illinois benze umsebenzi omuhle kuleso sicelo. Kepha unewindi elide. Kungani kuzoba ukuthi izicelo ngeke zitholakale kuze kube ngu-Okthoba 1 futhi ngeke zamukelwe ngemuva kukaJanuwari 20? Futhi-ke ngeke ukhiphe lezo zicelo kuze kube uMeyi 1. Ngakho cabanga ngalokho. Okthoba 1, Jan 1, Meyi 1… Ucingo lwakwaSouth Carolina. Kungenzeka kungabi yiklayenti lokuqala ukungishayela ucingo namuhla.
Ngakho-ke unoJanuwari 1 ka-2021 kulapho izicelo zakho kufanele khona. Isicelo awusitholi kuze kube u-Okthoba 1 ka-2019. Futhi ngeke kube nabangu-75. Kuzoba nokuningi okungaphezu kuka-75. Bazama ukufaka unyawo lwabo kulowo mnyango. Kepha-ke ngeke bamemezele ukuthi ngubani ophumelele izinyanga ezinhlanu. Futhi lezi yizinhlobo zezinhlelo zokusebenza ezizobe zishaywa. Futhi izicelo zizoba zinkulu ngoba kufanele uhlanganise leli thimba ukumaka wonke la mabhokisi azotholakala kulezi zinhlelo. Ngakho-ke uyaqonda, uma uzama ukukhuphukela kuma-200 futhi kungahle kube namaphuzu angama-212 kulokhu. Ngeke senze ividiyo njengamanje ngoba nginomhlangano cishe ku-45 okufanele ngifike kuwo.
Futhi ngakho-ke singakhuluma kancane mayelana nesikhathi nokuthi lelo khaya lokukhula lisekhona kwiziguli zensangu yezokwelapha. Masibuyele emuva kusabelo sesikrini futhi uzobona amanye amadethi wezinhlamvu ezibomvu athakazelisayo. So this one, to insure the geographic dispersion of [condotional 00:08:58] abantu abadala abanamalayisense enhlangano. Inombolo elandelayo yamalayisense izoklonyeliswa esifundeni ngasinye se-BLS njenge-blah, blah, blah. Futhi empeleni ngihlala lapha ePeoria, sizoya kwabathathu. Kuhle lokho kuhle kakhulu. Indawo yaseSt. Louis izothola ezine, iChicago impela ithole ama-47. Futhi lokhu kuncane kakhulu. Ngiqonde ukuthi kuningi kakhulu e-Illinois… ngiqonde ukuthi iRock Island ithola eyodwa kuphela yokukhala ngokuzwakalayo. Kepha uPeoria uthola abathathu. Yebo, indlela yokwenza lokho [Jehan 00:09:24]. Omuhle.
Futhi-ke ezinye, kukhona ukulinywa kukaJanuwari 21. Ake sibone, umnyango uyisishiyagalombili… Oh anginaso isiqiniseko sokuthi lowo uyini. Uhlelo lwamalayisense womphakathi ekolishi insangu uhlelo lokushayela umsebenzi. O lokho kupholile impela. Leyo yinto ebengingayazi nokuyazi… bengingazi nokuthi bekukhona lapho. Isigaba 25, i-Cannabis College, uhlelo lokushayela indiza lweCannabis. Uqinisile u-Illinois, iya ekolishi lomphakathi futhi ubaluleke kakhulu kwi-cannabis. Fuck ngingahle ngibhalise. Into ngalokhu yilezi yizikweletu ezimbili ezihlukene. Umthethosivivinywa owawuyi-SB007 iSenate engawudlulisanga, kunalokho iSenate yadlulisa i-HB1438 njengoba yethulwa eNdlu. Lowo mthethosivivinywa ungamakhasi angama-610 ubude. Ngakho-ke… Kukhona uhlelo lomshayeli wamakhono wasekolishi lomphakathi oluba lapho okungekho muntu okhuluma ngalo. Lokho akumangimazi kangako. Kepha kubukeka njengokuza e-Illinois, okuyinhloko yensangu. Limnandi impela.
Futhi ngiyaxolisa ngalokho. Vele bekufanele ngiphawule ngawo wonke la ma-2020. Bangu-32 babo esenzweni. Futhi manje sengizosondeza emuva kulokho futhi sizokhuluma ngokushesha okukhulu mayelana nokuthi yini engaba yisici esijabulisa kunazo zonke ukusetshenziswa kwabantu abadala e-Illinois okwenziwe izolo yiSenate. Futhi ngethemba ukuthi sizokhuluma ngokuthi yini engaba icala elihle. Futhi angazi noma kuzokwenzeka yini. Sizokhuluma ngakho ngokushesha okukhulu. Kodwa ama-40 craft grow licence ngoJulayi 1 ka-2020. Futhi-ke ngeke athengise kuze kube ngemuva kukaDisemba 21 ka-2021. Bese kuthi uDisemba 21 ka-2021 abe [inaudible 00:11:19] aze afike kwamanye amalayisense angama-60 okukhulisa ubuciko. Ngakho-ke kuzoba ne-100 okungenani, kahle i-100 okwamanje, amalayisense okukhulisa ubuciko aqhamukayo. Futhi-ke kunemikhawulo kulawo malayisense akhula ngobuciko. Futhi ngizo… Futhi-ke nangu omunye wabo. Futhi akukho layisense yokutshala ubuciko edlula i-150 neminye imikhawulo. Futhi-ke nazi izinto zohlelo lokusebenza esizodlula nazo.
Abalimi bezandla bayathandeka ngomqondo wokuthi lokho kuzoba yindlela abantu abangabuyela ngayo esikhaleni sensangu. Futhi kunemikhawulo yokuthi ngubani nokuthi yini engabanikazi bayo bonke. Kuzoba nenqwaba ye-log jam lapho yokuhambisa, yezobuciko ezikhulayo. Bese kuthi ngemuva kokungena kwabo, i-Illinois iyeke… Ngoba njengokulungile, uyakhula, uyacubungula, uyaba. Ngakwesokudla? Ngubani oshayela ibhodwe? Lokho kuzoba yilayisensi entsha ezobe iqhamuka, ezokuhamba. Ngakho-ke ngemuva kwalokho, olunye lwalezi zinsuku, olunye lwalezi zinsuku ezibomvu ezibhalwe lapho, uzokwazi ukuthola uhlobo oluthile lwelayisense. Futhi isikhungo sokulapha kanye nesikhungo sokulima kanye neprosesa ngeke zikwazi ukuhambisa insangu. Kuzofanele bayinikeze umthuthi onelayisense lokuhambisa leyo nsangu. Ngakho-ke ngizokugoqa lokhu ngoba ukungezwani komzimba kuyangibulala.
Njengoba kungenzeka ukuthi awazi, i-Illinois iyahlupheka, futhi ukuhlupheka kwezwe lonke ngenxa yezikhukhula ezimbi kunazo zonke selokhu kwaba noZamcolo Omkhulu ofana nowe-1927. Noma ngabe bathini ezindabeni. Umbila awukho ngempela emasimini. Izinkambu empeleni zimanzi. Cishe ubungalima irayisi. Yilokho… Sifana namazinga erayisi edayisi amanzi laphaya e-Illinois. Futhi ngicabanga ukuthi empeleni kubuyisela emuva isivuno se-hemp kancane. Ubani onendaba? Izolo, iSenate yase-Illinois ivotele ukufaka insangu ngokusemthethweni. Ngethemba ukuthi kwenzekani manje, ngoba iSishayamthetho sase-Illinois sihlehlisa uLwesihlanu, kusasa, ngoMeyi 31. Namuhla iNdlu izophasisa isikweletu sayo uqobo, i-HB1438. Kusasa uJB Pritzker uzowusayina ube ngumthetho. Kepha mhlawumbe kushesha kakhulu lokho. Mhlawumbe badinga isikhathi ukuze, uyazi, basebenzise lezi zinhlobo zezihloko zezindaba. Futhi lokho kungaba yinyanga eyodwa emangalisayo evela kuye ephuma ngempelasonto yokuqala kaMeyi bese ebamba lesi sithangami nabezindaba. Lapho akhiqiza khona lawo makhasi ayisishiyagalolunye engakha ikhasi kuwo. Futhi lokhu kuzoba yikhasi futhi. Kepha leli kuzoba ikhasi elincishisiwe eligxile kakhulu ekukhuleni kwasekhaya ukuze kusetshenziswe insangu yabantu abadala e-Illinois. Futhi-ke ezinye izindaba ezisizayo.
Wonke la makhasi angama-610, inqobo nje uma edlula, azokwenza okuqukethwe kwami ​​ukudala umsebenzi kube lula ngandlela thile. Kepha futhi kuyasabisa ngokwengeziwe. Ngoba njengoba ngenza lokhu okuqukethwe ubala ku-inthanethi bese abantu bakubiza. Futhi-ke abantu bafuna ukuthi ubasize bahlanganise lezi zinhlelo zokusebenza. Futhi-ke ukukho ngokuphelele lokho. Futhi-ke kukuningi kwe… Kuzoba… Ngingase ngibe mpunga onyakeni. Sizobona. Ngiyethemba ukuthi ngingalala. Ngakho kusasa, ngethemba lokuthi bazophasisa owabo umthethosivivinywa bese uJB Pritzker uba nesithangami nabezindaba esikhulu. Wonke umuntu uthi lokhu kuzomangaza kanjani izwe lase-Illinois. Futhi kuzoba njalo. Bese siqhubekela phambili singena. Kodwa-ke, angazi noma lokho kuzokwenzeka namuhla. Kwakungeke kungimangaze. Kuyamangalisa impela uma i-Illinois iba sesimweni sokuqala somthetho ukufaka insangu ngokusemthethweni. Futhi ukwenza lokho babedinga bobabili, hhayi uMongameli, umbusi kanye nazo zombili izindlu zeSishayamthetho Sombuso. Futhi-ke babesadinga… Futhi ngingavele nje…
Ukuqeda lokhu ngizokwabelana ngokuphela komthethosivivinywa wokusebenzisa abantu abadala e-Illinois. Iphela ngendatshana eyahlukene 999. Ngikholwa ukuthi lena yabhalwa ngu- [Herman Cane 00:15:21]. Njengoba ukwazi ukubona ukuthi inamakhasi ayi-610 ubude. Akukho ukusheshisa noma ukubambezeleka. Hhayi bo. Yebo. Ngoba mhlawumbe bakubeka lokho… Kulungile. Manje i-coder yami e-India idinga okuthile. Kulungile, kuhle lokho nje kunjani kimi. Uthola isikhathi bese abantu befuna izinto. Kulungile, ngifanele ngifike ehhovisi. Nginomuntu ozongena.
10100HB1438sam002 - 40 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 41 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 42 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 43 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 44 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 45 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 46 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 47 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 48 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 49 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 50 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 51 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 52 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 53 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 54 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 55 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 56 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 57 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 58 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 59 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 60 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 61 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 62 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a
10100HB1438sam002 - 63 - I-LRB101 04919 RLC 61359 a